Uyilo lwe-Oppo Reno lufihla ukumangaliswa kwikhamera yakho | I-Androidsis
Sonke siyazi ukuba u-Oppo uhlala edlala uvavanyo phambi kokumiliselwa kwayo nayiphi na ifowuni kusapho lwe-OnePlus. Kwaye zombini ezi brand, ukongeza kwi-VIVO, zeqela lezeshishini le-BKK elinemvelaphi yaseTshayina, kungoko ezinye iimodeli ze-Oppo zisisa phambili kuyilo lwe-OnePlus elandelayo. Ewe, njengoko Uyilo lweOppo Reno ube ngumanduleli wemodeli, akukho mntu unokukhanyela ukuba into entsha yekhamera yakho iya kuba inomdla kakhulu.
Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba amanye amatyala ahanjisiwe abonisa uyilo lwe-Oppo Reno, efihla inkcukacha eyothusayo: inkqubo entsha yekhamera erhoxiswayo ezahlula ngokwahlukileyo kuyo nayiphi na enye i-smartphone kwintengiso. Ngaba ufuna ifowuni eyahlukileyo? UReno omtsha ka-Oppo uya kuba. Ungathini ukuba le yenye ye Iimodeli ezinamarhe e-5G ezilungiswa yinkampani yaseAsia?
Ikhamera edibeneyo yokutsala uyilo olulodwa
Njengoko ubona kwimifanekiso ehamba neli nqaku, uyilo lwe-Oppo Reno luya kubandakanya ikhamera ebuyisekayo phezulu ukunqanda i-notch kunye nokubonelela ngesixhobo esikrini sonke. Lumka, sele sizibonile ezinye Imizekelo yeefoto ezithathwe ngekhamera ye-Oppo Reno kwaye iziphumo ziye zabonakala zisothusa kuthi. Ngaba yakho ikhamera ebuyekayo?
Nangona kuyinyani ukuba le mifanekiso inokuba iyinyani, kubonakala ngathi ingumfanekiso wokwenene. Kwaye ukuba sithathela ingqalelo ukuba kulindelwe ukuba U-Oppo Reno uza kwenziwa ngo-Epreli, amathuba okuba lo mfanekiso uyinyani ngokwenyani ngokucacileyo. Kwaye izixhobo zakho? Iya kuba kwinqanaba eliphezulu kakhulu. Ngale ndlela, i-Oppo Reno ingabandakanya iigugu kwisithsaba seQualcomm, iprosesa ye-Snapdragon 855, kunye noqwalaselo oluphakathi kwe-6 kunye ne-8 GB ye-RAM.
Ngoku kufuneka silinde u-Epreli 10, umhla oza kuthi ngokuqinisekileyo uveliswe ngawo lo Oppo Reno, ukubona ukuba umenzi waseAsia usothusa ngantoni. Kungenxa yokuba, kufuneka iqondwe into yokuba, ikhamera yayo ebuyisekayo, siyifumene inomdla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uyilo lwe-Oppo Reno lutyhileke ngobunewunewu obumangalisayo kwikhamera yayo